adala catz ...
fanontaniana adala catz ...
Misaotra anareo nandray: 14
2 taona 1 volana lasa izay #203 by PAYSON
Olon-kafa no tsy maintsy hitsidika ny adala catz / saitek matetika ny indray misintona ny tontonana mpamily sy ny Plugins? Hitako na dia ny resaka "hoe eny amin'ny rehetra" zavatra, zavatra raharaha kilonjy taorian'ny fitsidihana any. I angamba tokony hahazo SPAD fotsiny fa handre izany dia mananan ny kely quirks.
2 taona 1 volana lasa izay #204 by Gh0stRider203
Tsy mbola tsy maintsy, amim-pahatsorana.
Aho taloha mba Saitek x45 fa ny farany busted tamin'ny Me>.> NISY fanaovam amin'ny x55 amin'ny Ebay fa natao majorly outbid
2 taona 1 volana lasa izay #209 by kolijahc
Ahoana no handika ny x45? Just liana, ny vilany nivoaka. Izany no tiako indrindra angidimby tehina rehefa nandray ny loharano avy. Aho nandre izany dia azo atao mba hamerenana azy ireo amin'ny ody dipoavatra, dia nividy izany fa mbola ny hanandrana. Raha mbola niandry ny sambo iraisam-pirenena, dia nanomboka trolling Ebay koa. Nahita ny tsara indrindra ianao CH tehina afaka mahita (fighterstick USB) fa tahaka $ 40USD, ary ny mpanohana afaka mitsofoka USB ho an'ny $ 60USD. Mila rehetra dia ny throttle ary ho faly aho.
Tsy nanana vintana tsara amin'ny x55 sy x56 amin'ny Ebay. Na ahoana na ahoana overpriced, na ny lota lisitra (afa-tsy ny tapa-kazo sy ny tsy throttle izay manana ny circuitry rehetra, na ny mifamadika amin'izany) na untested (izay tsy manana USB seranan-tsambo sy 30 segondra?)
Be dia be ny olona tia hankahala azy ireo, fa iray amin'ireo tsara indrindra efaha efa hitako dia ny thrustmaster HOTAS X ($ 20USD), fa mitady ny manga iray izay ny HOTAS 4 ($ 30USD). Ataoko mpivady haingana Mods (fandavahana ny mpivady lavaka ho paracord tahony, ary hofoanako ny flange manodidina ny lohataona fanitsiana mbamin'ny kiboriny mba hahatonga ny lohataona removable rehefa calibration ho an'ny angidimby) dia hanolotra ireo ho any namako izay te-hianatra angidimby. mahatonga mahafinaritra tehina indray mandeha solosaina ianao dia afaka mitondra ny manambitana zavatra mora foana.
2 taona 1 volana lasa izay #215 by PAYSON
Miarahaba KC, izaho tsy nanana X-45, Mino aho fa nanao ny crossover hafatra. Rehetra hatramin'izay aho no Saitek nanana ny X-55 HOTAS fanaraha-maso ny rafitra. Tsy maintsy ho somary "tsiroaroa". Raha te fotsiny tapa-kazo ary ny sasany bokotra aho hiverina ho any ny Logitech Faratampony, izay rehetra ilainao raha mpanamory ny fiaramanidina. Raha toa ianao (tahaka ahy) manao ady amin'ny sasany AI lehibe, dia ny X-55 (na 65) "fanaraha-maso ny rafitra" dia ny mafana HOTAS tapakila.
2 taona 1 volana lasa izay #217 by Gh0stRider203
voalohany eny, nanaisotra ny dika mitovy lahatsoratra LOL Azoko antoka fa tsy niniana ka tsy misy laps manodidina an-tsaha LOL
Tsy mahafantatra izay rehetra nandeha niaraka tamin'ny tapa-kazo fa mahalala ny throttle anjara busted rehefa very NY mahay mandanjalanja sy ny tanako nidina teo amin'ny tahony, Mitady handrapaka azy eny.
CRAPPY famolavolana ho throttle, raha manontany Ahy ianao ... dia niezaka ny hanao fanamboarana vonjimaika mampiasa kasety ara-pitsaboana sasany, fa fantatrao tsara fa tsy iany no haharitra mandrakizay.
Raha tsy misy anefa ny tsora-kazo, ny throttle dia tsy misy ilàna azy. Seg iray aho mampiasa ny tsora-kazo, ny manaraka no haka azy io mba Squash ny bibikely (ny zavatra iray Halako TENA momba ny trano dia ny manambitana roaches. Izaho efa hoe ny tanàna izany mazava tsara, fa tsy nanao ny tsara izany Heveriko fa ny MANARAKA antso dia ny amin'ny County Health Dept)., dia nanorina azy indray izy ka afaka miasa. Aho tahaka WTF? tena?
2 taona 1 volana lasa izay #218 by Gh0stRider203
PAYSON nanoratra: Miarahaba KC, izaho tsy nanana X-45, Mino aho fa nanao ny crossover hafatra. Rehetra hatramin'izay aho no Saitek nanana ny X-55 HOTAS fanaraha-maso ny rafitra. Tsy maintsy ho somary "tsiroaroa". Raha te fotsiny tapa-kazo ary ny sasany bokotra aho hiverina ho any ny Logitech Faratampony, izay rehetra ilainao raha mpanamory ny fiaramanidina. Raha toa ianao (tahaka ahy) manao ady amin'ny sasany AI lehibe, dia ny X-55 (na 65) "fanaraha-maso ny rafitra" dia ny mafana HOTAS tapakila.
ya mahita fa tsy manao be dia be ny rivotra ny rivotra ady, fa tia ny asa rehetra eo amin'ny 55 toy ny raha mbola manidina VE indrindra jumbos ... tsara tarehy be aho nahazo pampiasana ho an'ny tokan-tena rehetra bokotra LOL
Koa satria manao bebe kokoa aho ILS manatona andro izany (aho taloha mba nankahala ILS ankehitriny dia tia azy LOL), dia mirona hanao ny mpivady setup ny Mifantoka ny mifamadika amin'ny GPS ho NAV1 sy Nav Hanatonana. Mihevitra aho fa ny hany zavatra tena nampiasa ny fitendry Nony ny 45 dia niresaka tamin'ny ATC, hiverina amin'ny / eny ny APU, ary angamba 1 na 2 zavatra kely LOL
2 taona 1 volana lasa izay #221 by PAYSON
OK ! Tsy maintsy ho ato diso forum. Maro miala tsiny .gtg
Fotoana mamorona pejy: 0.516 segondra